fampiasam-bola | ny tsy manam-petra tontolo izao voarindra
Posted in fahefana . fahotana . vola . Zava-poana . zava-misy . -bola
- Mr., efa tsy hita ao anatin'ny sehatry ny ny omby, izay nandositra?
- tsy, Tsy azoko an-toerana lapoely.
- Mr., ka omeo ahy ny omby na vilany eo an-toerana?
- Rehefa ny vilany avy ireo andrianan'ny – ka manome, Ary raha avy muzhikou – dia.
(Singa ny Belarosiana tantara)
Ny nanome dia manan-kery ho an'ny ny olona rehetra.
Te handrava ny vahoaka? – nastrugai “Panov” avy amin'ny “olona”.
Ahoana no mba hahazoam-bola ao amin'ny World, Raha tsy misy ho loharanom-baovao ho fidiram-bola mifototra amin'ny fifanakalozana ny entam-barotra? Ahoana no manafina, misy fidiram-bola izay miteraka ampahany fandringanana Eran-tany, satria dia mifototra amin'ny otgryzanii lehibe na kely tapa- “ny henan'omby”? henan'omby, izay azo antoka mba hamaranana. Существует множество способов реализовать такие подлые замыслы.
Raha ara-tantara amin'ny toerana sasany mitantana mba hanangana mendrika Fanjakana Natanjaka, iza no manam-bola na dia diamondra efitra – Mazava misy ny faniriana avy amin'ny mpanao heloka bevava isan-karazany mba hisambotra azy io ny tenanao rehetra. tsara, na, anefa, ny, fa avy sitrapon'Andriamanitra, raha manao fifanjevoana lehibe sy fikorontanana mandamina.
Indiana fanoharana momba ny roa amboadia.
Indray andro Indiana antitra nanokatra ny zafikeliny iray fiainany ny fahamarinana.
- Ao ny olona rehetra dia misy ny tolona, tena mitovy ny ady eo amin'ny roa amboadia.
Amboadia iray dia maneho ny ratsy - fialonana, fahasaro-piaro, nanenina, fitiavan-tena, fanirian-daza, lainga…
Ny hafa ambodia Tsara - fiadanana, fitiavana, manantena, fahamarinana, hatsaram-panahy, tsy fivadihana…
kely Indian, Nanohina ny fototra teny raibe,
fa ny fotoana vitsivitsy mieritreritra, ary avy eo dia nanontany:
- Ary inona no amboadia amin'ny farany Fandresena?
Old Indian Nitsiky kely ka namaly hoe::
- mandresy foana ny amboadia, izay sakafo.
Raha manaraka ny teny “ny olona dia amboadia” – dia afaka haneho be dia be.
avy amin'ny dikantenin'i: Ny olona dia ny amboadia [Homo khomini lyupus sela).
Ny avy amin'i «Asinaria» milalao ("Boriky Comedy") Romanina sy ny mpanoratra tantara tsangana mpanoratra Plautus (Titosy Plautus Maktsiy, ca.. 250 - 184 BC. e.).
Ilay teny faharoa dia nahita ny fiainana ary ho lasa malaza noho ny filozofa ara-politika anglisy Thomas Hobbes (1-588-1679), izay nampiasa azy io amin'ny asany "leviatana" (tsy misy. 1, jereo. 14). Dia naneho hevitra momba ny thesis momba ny "ady rehetra hamely rehetra", izany hoe ny toe-, izay mampiavaka ny fiaraha-monina ny olona mandra- panjakana Institute…
Noho izany dia mora ny milaza, fa ny olona rehetra – dia somary Wolf. Ary ho tafavoaka velona ireo amboadia, mba hahita sakafo. Ny fomba tsotra indrindra – vonoy, ka hano ny osa sy ny mpiaro. Na hitondra tena toy izany, maro no te ho mpiandry ny amboadia dia toy izany miavaka. Mba hanaovana izany, mba hahafahanao haka toerana ambony – Dia ho afa-baraka izay rehetra hiandrandra ambaratonga ambony, на котором уже поджидает всех хитрый волк.
Noho ny zava-misy, fa misy hafa Endriky ny hanoanana, mpanenona mahay, ho afa-po foana ny amboadia. Sady miandry azy amin'ny ny fiheverana-pifaliana, matetika, izy ireo, izay taty aoriana nanenina.
Araka ny iray amin'ireo antony mahatonga ny fahafatesana eto an-tany, dia maro ireo mponina no mirotsaka amin'ny fivarotan-tena tokantrano. Noho izany dia niteraka korontana mivantana na an-kolaka, ao amin'ny fianakaviana ary ny fifandraisana amin'ny fianakaviana, izay manokatra ny mety ho pumping vola avy amin'ny fianakaviana sy ny nahaterahan'i kisendrasendra ankizy dia mazava avy izay. Raha toe-javatra io dia mitohy nandritra ny fotoana ela – Fiainana eto an-tany mampiova ny endriny ho loza lehibe iray.
Raha ny biolojika sakafo amin'ny fomba rehetra tratry ny ananany ny tenako olom-pirenena rehetra tsy miankina – ny fahafaham-po ny sasany ilain'ny vatana kolaka kokoa momba ny tena dia mety ho sarotra mila mpanohitra anjara, mpiara-miombon'antoka na mifameno tapany.
Mizara amboadia ao amin'ny lahy sy ny vavy, mora ny hametraka, miaina hanoanana-pihetseham-po izay ny amboadia, izay vehivavy no tsy mety manatona ny fifandraisana (fotoana tsy mampaninona). Aiza eto amin'izao tontolo izao mba hamorona ny fepetra izay nanome fahafaham-po ny zavatra ilain'ny rehetra ny amboadia, mpitarika fiainana, izay mampiavaka ny toe-tsaina ny olon-dozabe manoloana ny natiora sy ny tontolo iainana – ny fahombiazan'ny fampandrosoana ny amboadia toy izany dia hitarika antsika amin'ny fanjavonana tanteraka izao tontolo izao sy ny mponina. ao amin'io, sakafo ny amboadia, vehivavy manao toy ny heloka atao amin'ny fiadanana be, na lahy sy manimba nandinika World. Ary izao tontolo izao dia nampihetsi-po mafy ny mahafaty Future. Mandritra izany fotoana izany dia tsy manelingelina, ahoana ny hevitrao momba izany ny mosarena amboadia.
Tsy sarotra ny mahita, fa ny foana mihasimba ny karazany ho ao amin'ny tontolo toy izany koa. Ary ny tombony ao an-tanan'ny ny fako sy ny fako amboadia, izay noho ny tombony sy ny hihaona ao anatin'ny fotoana fohy whims tsy misalasala diky izay podvernotsya, hatrany Trash fomba fiainana, mamadika ny tontolo manodidina amin'ny maimbo be fako. Rehefa dinihina tokoa,, raha misy jerk “amin'izao fotoana izao” – “avy eo” efa marina io dia tsy mety (satria tsy hisy olona). dia toy izany no, vitsivitsy lasa mpanjaka tsingerina smerdy, noho ny trashcan niteraka amboadia dia tsy ho velona.
Smerdy miezaka ny hanasa matetika araka izay azo atao. Izany dia vokatry ny mampihavaka ny ADN, noho izay ny tenany dia tsy mitsahatra stinks. Noho izany simbasimba fampiasana ny rano eto amin'izao tontolo izao dia mamadika ny fako imbetsaka haingana.
Noho izany,, Nitady Nametraka politika maimbo manery purebred vavy manao fahadisoana, ary hanome ny taranaky ny amboadia fako. Noho izany misy simba haingana ny karazany (noho ny cyclicality ny fahadisoana mitovy), ary mpiara-mandova maka endrika tonga lafatra kokoa amin'ny farany tsingerim-levitra evolisiona, potipotika ny haavon'ny ny festering olitra. Izany no mpandresy diabe ny fako mirehitra amboadia, mitady amin'ny farany “mamirapiratra” ny ho avy. Aoka izy ireo mitroka ny fahaverezam-panantenana ny namaboana an'i Jehovah, Пространства Жизни и Пространства Планеты.
Mba hanamafy orina ny toerana voaro Random Kings dia afaka hamelatra ny fiheverana ny fitoviana, mba manafina ny tsy fahombiazana ary tsy mifanaraka toerana ofisialy, продолжая одурачивать Мир, nifindrany tany na aiza na aiza.
fitoviana – fa foto-kevitra hevi-dravina, izay tsy ara-drariny eo ambany fitsipika ihany no ilaina ho an'ny, izay bamboozled nanjaka naka ny fanapahan-kevitra bydlota, fa soa durachilam. faobe tupizna – ny fanalahidin'ny mahomby sy maharitra hifehy fako amboadia.
Korontam-bola fizarana ny fiaraha-monina mitondra ny niely patrana. Mety hanafoanana ny fananganana sy ny fampiroboroboana ny fiainana rehetra-fanamafisana tari-dalana. Amin 'izany hanjavona misy fifaninanana sy ny loza mitatao ho an'ny efa misy manam-pahefana.
maro an'isa fitsipika (izao no no tiana holazaina amin'ny fitoviana) soa aman-tsara Hihasimba hatsaran'ny fampandrosoana foibe, nandentika ny tsy fitiavany maizina ho an'izao tontolo izao, in aiza no “indrindra”. Ny tontolo iainana voajanahary dia analogue modely ny fanjakana eny mikraoba ny Nature: Mikraoba fotsiny maro an'isa, ary izy ireo ihany no afaka mandray “marina” fanapahan-kevitra, satria mikraoba – ny zavaboary manan-tsaina indrindra eo amin'ny natiora, tsirairay amin'izy ireo mahay, na dia, noho Nature tenany.
Afaka manome mikraoba ny fitaovam-piadiana ho an'ny, ka dia mametraka ny saina ho azy. Ary avy eo ny olona rehetra dia ho afaka ny hahita ny vokatry ny asany ny halalinan-tsainy, izay, na izany aza, koa tsy ho hafa noho ny vovoka. Rehefa dinihina tokoa,, mikraoba mitam-piadiana manao “miavaka tsara sy feno fahazavana”.
Tsy toy ny efa misy, izay hanana ka ho velona araka ny asa sy ny zava-bita ny asa, katsentsitra miaina amin'ny lany amin'ny, izay nahavita hamiravira, nip, hitsentsitra ny zavatra over izay parasitize. Amin'ny teny hafa, raha ity zavatra – ny firenena iray manontolo – bibikely, gnawing sy ny mbola minono ny miaramilany, vola, fananana, mety, lanin'ny na inona na inona no nahazo ny fananganana iray misoko mangina kokoa ny parasitism teknika sy ny fandaminana dia nanaiky ny rafitra fanaraha-maso ny olona mahery setra. Noho izany ny olona tena ny amin'ny katsentsitra lafiny ara-bola mba, fa azony nosimbana, ary dia nataony mahatsiravina indrindra.
“nahay”, vetaveta ny lalàna voajanahary no nomena fitsaboana feno toeram-pitsaboana in Space.
Ny asan'ny rafitra misy dia tsy betsaka samy hafa avy amin'ny fanafanana rafitra. izay, Mazava ho azy fa, Mila solika, mba hamokarana angovo mafana. Mba nafanaina ny rano, matetika, fampiasana afo, ary ny afo dia azo vokatry ny solika setroka, izay mety ho tapa-kazo sy hazo.
Toy izany koa, ny ara-bola ho an'ny rafitra iray ny fisiany dia mitaky foana ny famatsiana angovo. Fa aiza ny anadahiny?
sisa angovo – dia ny angovo izay hita ao anatin'ny zavatra, azo atao ny hanesorana afa-tsy ny hetsika, raha handrava ny zavatra, na hanakorontana ny fahamarinan-toeran'ny ny endrika. Inona no mety ho tratra amin'ny alalan'ny zavatra setroka ao amin'ny afo. Amin'ity tranga ity, dia ho voatery handoro tanteraka sy tsy misy réserve.
Ny fahatsiarovan-tena manana ny mivadika, simba izay mitondra ho amin'ny famotsorana ny angovo, izay ilaina ho amin'ny fisian'ny rafitra ara-bola. Ao izany, ny olombelona dia afo hazo ao amin'ny rafitra ara-bola na ny ara-bola solika. Ary raha misy mahatsapa mandika ny fahitsian'ny – dia mirehitra amin'ny afo rafitra, na iza na iza tsy hiantra.
Eto an-tany any amin'ny fahafatesana no matetika halatra ny fananany manokana, rehefa “lany andro tain-drendrika”, mandray soa avy toerana ofisialy, adala ny tanora manan-talenta, hametraka ny vato misakana ny fampandrosoana sy ny fahalalana 'izao tontolo izao. Mihazona azy nandritra ny fotoana ela tao amin'ny maizina sy ny tsy fahazoana antoka, mandefa ny tsara indrindra nandritra ny taona maro ny fiainany ao amin'ny fako.
Mpikarakara marary saina fandringanana voatendry ny rafitra mahavariana, dia mamirapiratra ao amin'ny fahazavan'ny afo nandroaka an'i Light.
Raha miresaka momba ny fomba amam-panao, ny fahafatesana efa misy planeta – tsy azo atao ny Revolisiona tsy miraharaha, izay heverina ho ny fanovana zanabolana amin'ny lalàna.
Tsy manam-potoana ho lasa fanjakana iray ny tongony tahaka ny manolo iray hafa, more “tonga lafatra”. Fa izay misy ny tongony mitombo amin'ny toy izany “tonga lafatra”?
Matetika revolisiona hitranga avy eo, rehefa lehibe (fa tsy ny lehibe indrindra) “mpilalao iraisam-pirenena”, Efa handeha hanao “ezaka”.
Mba hamonjy ny tsy voahozongozona ny heriny sy hiarovana ny aina chernosuschnostnye izy tatỳ aoriana mba hisambotra fikorontanana mandamina ny mety ho fitaovam-piadiana ny nisokatra “malaza mpilalao”. Ary rehefa afaka ny ain'ny ny revolisiona, toy ny, mahazo tsara kokoa, fa satria fotsiny, Ny fahafahana no tafiditra vaovao, na dia tsy naharitra ela.
More Revolution dia, raha izany “Oparin”, fantany ny fahaverezam-panantenana ny amin'ny fisian'Andriamanitra, mikatsaka ny hitsidika (tsy, fara fahakeliny, nandritra ny fotoana ela) ny seza fiandrianana Imperial, na dia ny vola lany ny fiainana sy ny haren'ny firenena iray manontolo. Izy no mahafantatra tsara ny tena maha, izay misy toerana fivoahana ihany ao amin'ny lavaka. ao amin'io, raha azo atao “olitra” incinerate vonona ny zava-drehetra, fa tsara kokoa fanantenana eo amin'ny fiainany ary tsy ho.
Noho ny vokatry ny asa ara-tsaina “olitra” ary “ombelahin-tongony refin-” Ny fahazavana no teraka ny rafitra fitaovana toy izany ny fiainana, fa ambanin'ny masina rehetra indrindra, lehibe sy mafy handrava ny teny filamatra taloha mora voninahitra sy hery ho an'ny sasany 100 taona. “Oparışam” ampy ho zato taona, mba hampody ny firenena malaza amin'ny diamondra foibe amin'ny lavaka fivoahana.
Raha ny isan'ny mpiasam-panjakana dia toa marani-tsaina fanavaozana, afaka hanafoana ny ilaina ny revolisiona – voalohany toy izany famonoana. ohatra, indray mandeha amin'ny iray amin'ireo planeta ny fahafatesana jiolahy ny mpanao heloka bevava no maty voatifitra ny lehilahy anarana Stolypin, sy ny fanavaozana dia ampiharina eo amin'ny Shina. No nandravana ny mponina ao Shina dia nitombo avo folo heny (tsy ara-dalàna ny antsasany any) , ary ny mponina Rosia dia shrunk ny antsasany ary mbola mandà.
Tsy misy heloka in, fa ny fahatsiarovan-tena madio tsy te-hiaina ao anaty lavaka fivoahana, Fa meloka amin 'ny, izay nikarakara izany lavaka: Angamba karazana iray sola jiolahy tamin'ny lalana lehibe sy ny mpanao heloka bevava iraisam-pirenena miaraka amin'ny anarana, anaram-bositra. Izay tokony ho valisoa noho ny asa tsara nataon'ny 13 heny ny isan'ny rano indray mitete ao amin'ny frontloading sy ny zana-fitsanganana amin'ny maty. Mpanao didy jadona rehetra koa dia tsy maintsy ho toy izany koa ny valisoa. Fa ny porofo-kevitra, izay meloka ka amin'ny zavatra rehetra Lena, izay lasa mpankafy. Fotsiny toy izany, fa tsy miharihary malemy marefo vehivavy efa nandrava ny Fanjakana manontolo ka nitsambikina tao anaty korontana rehetra izao tontolo izao ny mponina nandritra ny taona maro. Tolley avy amin'ny tsy fahaizany mifehy ny fihetseham-pony na ny eritreriny, felts izany nanao ny asa ny fiaraha-monina miafina, na nesorina avy izay vahiny. noho izany, “Lena” Leno-tahaka, ary voaheloka higadra hapetraka eo ambany fanaraha-maso ny zavamisy sy ny fampiharana ny biolojika adidy, na any amin'ny iray mahazatra fandroahana raha sendra ny tsy fankatoavana.
Endri-javatra revolisiona ireo fa, fa talohan'ny ny voalaminy voatery hitranga pifandraisan “tamy ny governemanta” tsy mendrika tanana. Ary dia toy izany no matihanina sudbolovy vao niova fo ho nanao lomoverzhtsev. Revolisiona Tsy rariny.
TK. “olitra” avy amin'ny lavaka lava-piringa no mahafantatra tsara ny tsy fisian'ny fifaninanana – mamono ny mpifaninana rehetra, miaraka amin'ny fanampian'ny bala sy ny handgun, ary ny olona duping lava delves: “inona, araka izay rehetra, dia?” A zato taona manomboka izao (rehefa tafiditra) Hihira izy ireo rava, satria tsotra loatra loatra.
Taorian'ny fahombiazana duping hifehy ny olona “nandidy” asa, ary fahaizana izy hahavitany ny asa sokitra jiolahy manomboka nandova “henan'omby”. ary ahoana!? Firenena toy izany dia tsy ho hanana, satria Mizara eo, fara fahakeliny, ny sasany, izay nahazo.
Ary maika onsam Valparaiso,
By Onduri Nihazakazaka robla.
ary ianareo, adala, manandrana,
Izany antsy maranitra eo ambany ra.
Mifindra amin'ny alalan'ny paika ny ambony voasambotra famatsiam-bola, mpangalatra sy ny mpanao heloka bevava teo aloha niova ho maoderina mpampiasa vola. Ary hanomboka hanao “tsara”. Mety ho ny fanorenana trano maoderina vaovao eo amin'ny sisa tavela ao amin'ny firenena potika. Fa ny mponina ao an-toerana manomboka ny voninahitra sy ny fanajana toy ny ambony sy mpanao asa soa mpampiasa vola, ary faly, raha mamoaka iray voavily ponenana teo amin'ny faritra misy. Mazava ho azy, ny fotoana dia fantatra amin'ny anarana hoe ny hafa firenena, satria noterena handao ny firenena, ho tony, ary minia handroba azy. fa, ny fahafatesan'ny planeta lasa adala mikorontana.
Izany matetika no mitranga baryzhnichestva vola vahiny amin'ny toerana toy izany. Ny fanangonan-karena ny lehibe fahafahana ara-bola ampy huckster izany manokatra ny ny banky ary mbola manana asa tsy ara-dalàna efa eo ambany ny famantarana “lalàna”. afaka “lalàna” Voasoratra 'izany ihany koa huckster?
Doryvayas amin'ny fitondrana, mamitsaka intruder manomboka tsikelikely sy covertly ho fampiharana revolisiona “lalàna”. na dia, Raha ny hery no nandray ny manam-pahefana – vokatry ny asany tsy misy isalasalana, fa “lalàna” nisy revolisiona. Iza faran'ny, ny olona, ​​na ny ho avy dia mitoetra ao amin'ny mpitondra vaovao “miaraka na inona na inona”: Mijaly izy ary mitondra ny tsiny noho ny heloka bevava, fa tsy hanao, ary, na dia, raha ny namelezany – Dia tsy afaka misakana izany rehetra izany.
Fa ny mpanao heloka bevava dikany izany rehetra izany tsy maintsy atao mba, amin'ny toe-javatra tsirairay ny hifehy bokotra iray. Ny fananganana izany “hanoto-bokotra vahaolana” – hevitra dia tsy tena tsotra. Ao amin'io fampiharana no ampiasaina noho ny tsara indrindra atidoha, koa, ala-olana isan-karazany eo ambany,: Misy fampanantenana tsy hamono, mampanantena hafa mba hanatsarana, omeo ny olona iray vao mirotsaka amin'ny toerana tena asa fa tsy tiana. Fa amin'ny farany dia mamorona vahaolana bokotra, tsirairay izay mandika mivantana ny olona eto an-tany (anisan'izany manohitra ny mpamorona ny tenany) noho izany, fa “bokotra” Izany dia eo am-pelatanan'ny mpanao heloka bevava.
ny anankiray “nefa matromatroka” fanaraha-maso bokotra telo-manan-tsaina rehetra – izany dia antsoina hoe “raharaham-barotra“.
raha “raharaham-barotra” intsony ny hiteraka tombontsoa lehibe ara-bola – mpandraharaha no nampiasa ny fanampiana ny loza ary namoizana aina. Satria ilay farany no manome ny malahelo, mba hihaona amin'ny fanabeazana fototra ilaina, ary na dia vonona ny hiasa maimaim-poana.
“alahelo” – eto ny tsara indrindra loharanom-tombony.
Noho ny fandrisihana hatraiza hatraiza foci “mijaly ny olon-kafa” Ny fahafatesana manjaka eto an-tany maso korontana, izay ny fananganana sy ny fampandrosoana azo atao na inona na inona fiainana-fanamafisana flow. Satria Eran-tany, izay “vehivavy” tsy asitriho any aminao, Tsy te-hiaro. Tsy izany?
5`Nizza - izany
DDT – Rehefa mihazakazaka ny menaka
Согласен со всем выше сказанным(написанным.) Ежели бы “быдло” о том знало, ny”olitra”,жили в г… На своей родине:)
Ny fomba fampiharana manaiky